आखिर के भयो यस्तो सर्वोच्चमा, छ जना वकिल घाइते ! - jagritikhabar.com
आखिर के भयो यस्तो सर्वोच्चमा, छ जना वकिल घाइते !
सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको राजीनामा माग गर्दै कानुन व्यबसायीले जारी राखेको विरो’ध प्रदशनका क्रममा प्र’हरी र कानुन ब्यबसायबीच धके’लाधकेल भएको छ ।
बिहीबार प्रधा’नन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जब’राको राजीनामा माग गर्दै सर्वोच्च अदालत परिसरमा नेपाल बार एशोसिएसनका वकिलहरुको धर्ना दिँदै ना’राबाजी गर्नुभएको थियो ।
त्यसलाई व्यबस्थापन गर्ने क्रममा कानुन व्यवसायीहरुले सुरक्षाकर्मीमाथि जबजस्ती गर्नुभएको सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
सर्वोच्च प्रवक्त दाहालले कानुन व्यव’सायीले सुरक्षाकर्मीमाथि जबरजस्ती गरेपछि सुरक्षाको दृष्टिकोणले स्थिति नियन्त्रणमा लिन खोजिएको बताउनुभयो ।
‘कानुन व्यवसायीमाथि प्रहरी हातपात भएको होइन । प्रशासनिक निर्देशन पनि केही होइन । सुरक्षाकर्मी नियमित सुरक्षाको लागि आफ्नो कर्त’व्य निर्वाह गर्नुभएको हो ।
यसैगरी सामाजिक विकासमन्त्रीमा कुमारी मोक्तान, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयमा कृष्णलाल भँडेल र आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीमा कृष्णप्रसाद खनालले आआफ्नो मन्त्रालय सम्हाल्दै आउनुभएको थियो ।	तत्कालीन मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले गत कात्तिक १० गते मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएसँगै उक्त पदमा पाण्डे नियुक्त हुनुभएको हो ।